Gịnị mere ficus ji acha odo odo ma daa na epupụta?
Egwu na ụlọ anyị dị mma - osisi a (dabere na ụdị dịgasị iche iche) kwesịrị ekwesị maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Ebube na-egbuke egbuke sitere na emerald na agba aja aja gbara ọchịchịrị, na-echekwa nke ọma - ezigbo nganga nke onye nnabata ahụ.
Ma ọ bụrụ na ficus na-emegharị edozi na-acha edo edo na epupụta, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ịghọta ihe mere nke a ji eme, iji nyere osisi ahụ aka ịmaliteghachi ịma mma.
Tupu ịtụ ụjọ ịchọta ihe mere Benjamin ji gbanwee agba edo edo na akwukwo ala na-ada na oyi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, cheta na ihe nile nwere mmalite na njedebe ya. Otu ihe gbasara osisi. Akwụkwọ nke ficus na nkezi ndụ site na atọ ruo afọ anọ, na mgbe ọ nwụrụ na ọ yiri ka grading yellowing nke ala ala nke akwụkwọ na-ada.
Gbanwee ọnọdụ nke ọdịnaya
Nke a na osisi dị nnọọ nlezianya dị iche iche fluctuations na okpomọkụ, iru mmiri na ìhè, nke mere na Atụmatụ nke epupụta atụgharị odo. Na-emerụ oyi ikuku, nke na-afụ ụgbụ na ifuru. Igwe ụlọ ndị dị otú ahụ na-eme ka ikuku dị ala, ya mere ha chọrọ ka ndị ọzọ na-ekpo ọkụ ma na-ebugharị ficus ahụ.
Ọbụna eziokwu ahụ na ite ahụ tinyere osisi ahụ ka ọ na-abanye n'ime ụlọ ma belata ìhè anyanwụ n'elu akwụkwọ ahụ nwere ike ime ka ficus ghọọ odo ma tụfuo akwụkwọ. Osisi a na-achọ ka ọkụ na-agbasasị, bụ nke na-adịkarịghị n'oge oyi ma ifuru na-arịa ọrịa.
Iju mmiri nke osisi
Ihe nbibi nke osisi ahụ nwere ike ịbụ njedebe nke usoro mgbọrọgwụ ahụ, nke mere Benjamin ji kpoo nkụ, akwụkwọ ya na-achakwa odo ma daa. Iji jide n'aka na ị na-eche, ị ga-ewepụ osisi ahụ na ite iji mee ka ala na-agabiga. A ghaghị egbutu mgbọrọgwụ Rotten ma mesoo ya na ngwọta nke potassium ma ọ bụ unyi, wee sụgharịa ya n'ime ala dị ọhụrụ nke wụfuru ụfọdụ fungicide.
Ficus dị nnọọ nlezianya banyere oke mmiri dị n'ime ala, ya mere ịgbara ya dị mkpa mgbe ụwa kọnwụrụ. Ọzọkwa, osisi adịghị amasị ịmịchaa ozugbo transplantation - ọ nwere ike budata mmebi. Mgbe nkedo na akpa ọhụrụ, mmiri nke ficus adịghị mkpa tupu otu izu.
Ficus na-enwe mmasị mgbe okpomọkụ dị n'ime ụlọ adịghị elu karịa 25 Celsius C ma ghara ịda n'okpuru 18 Celsius C. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ dị njọ ma na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ, epupụta na-eme nke mbụ, ha na-agbanwe na-agbanwe (turgor), wilt, malite ịgbanwuo odo ma nwụọ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe temometa na-egosi na ọ dịkarịa ala 18 Celsius C, osisi ahụ na-arịwanye elu n'okpuru anya. Ihe kpatara ọnọdụ a nwere ike ịbụ na a na-edebe tub ahụ na nkume oyi (ma ọ bụ nkume) ma ọ bụ windo sill, mgbe ahụ, mgbọrọgwụ ndị dị oke ọcha na usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha nke a ga-ahụ na osisi ahụ malitere.
Anụ na ọrịa
Mpempe obere akwụkwọ, ngwa ngwa ha na-egbu egbu ma na-acha odo odo nwere ike ikwu okwu banyere enweghị aha anụ ahụ n'ala. Karịsịa mgbe nke a na-eme na ndị nwe obodo dị nkọ, bụ ndị, n'ụzọ ọ bụla, chọrọ ịkụ mkpụrụ osisi ahụ ma mee ya ugboro ugboro ma ọ bụ gafere usoro onunu ogwu pụtara.
Enwere ike idozi ọnọdụ a site n'ịgbanwe ala ka ọ dị ọhụrụ, nke ịchọrọ ịzụta na ụlọ ahịa pụrụ iche, a ga-ahazi ya kpọmkwem maka ficus. Uwe elu n'elu mgbe a na-atụgharị ya ka ọ ghara ịmalite karịa ọnwa abụọ.
Akwụkwọ nke ficus nwere ike ịmịchaa wee gbanwee edo edo n'ihi ọnụnọ nke ọnyà ududo na azụ nke akwukwo ma ọ bụ na nematode na-emetụta mgbọrọgwụ ahụ. Ịchọpụta ọgwụ nsị ga-achọ ọgwụgwọ na kemịkal pụrụ iche ma dochie ala na ndị ọhụrụ.
Ịlụ mkpụrụ osisi na osisi apụl
Kedu ka esi akụ garlic?
Ngwá ọrụ maka ịbanye oghere
Ịfụ mkpụrụ osisi n'oge mgbụsị akwụkwọ
Plumeria si na mkpụrụ osisi n'ụlọ
Liatris - kụrụ ma lekọta
Broccoli - na-eto eto ma na-eji ejiji na-emeghe ala, iwu dị mfe maka owuwe ihe ubi dị mma
Kedu ka esi eji akwa nwa?
Cindy Crawford guzosiri ike maka nwa ya nwaanyị bụ Kayu Gerber n'ihu ndị na-amaghị ihe banyere azụmahịa
Nzube ịzụta ụlọ na ala
Uro n'ihi ikpere ikpere
Nwa nwanyi na-acha anụnụ anụnụ - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi dị mma?
Justin Bieber mere ka ndị Fans jiri foto ọzọ gba ọtọ
Ụgbọ okporo ụzọ Flåm
Agbamakwụkwọ ejiji 2016 - Uwe
N'osisi fig nke Benjamin na-ada akwụkwọ - ihe ị ga-eme?
Ngwa maka uwe na-acha anụnụ anụnụ
Okwute akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ
Ụlọ ihe nkiri nke ihe osise nke oge a
Ihe ngosi agbamakwụkwọ maka nwoke na nwanyị
Esi akwa si na oke bekee
Ihe na-enye nri isi - niile banyere nri kwesịrị ekwesị nke anụ ụlọ